တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည် MC အမျိုးအစားသွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း China Manufacturer
MC Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,ဆိုက်ကို Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်သွေးခုန်နှုန်းအိတ် Filter ကို
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: MC Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,ဆိုက်ကို Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး,အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်သွေးခုန်နှုန်းအိတ် Filter ကို
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > သွေးခုန်နှုန်း Deduster > တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည် MC အမျိုးအစားသွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
 တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည် MC အမျိုးအစားသွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
ဒါဟာကျယ်ပြန့်အစားအစာ, ဆေးဝါး, အစာကျွေးခြင်း, သတ္တုဗေဒ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဘိလပ်မြေ, စက်မှု, ဓာတု, လျှပ်စစ်, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, ဖုန်မှုန့်သန့်စင်ခြင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်ပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်အသုံးပြုသည်။
မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့ပြာရေပုံး (သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်အနိမ့်ပွင့်လင်းအနားကွပ်) အားဖြင့်စစ်ထုတ်အခန်းထဲကထဲသို့ဝင်သဖြင့်, ကြမ်းမှုန်ပြာ Hopper တွေလည်းဒါမှမဟုတ်ပြာဘင်သို့တိုက်ရိုက်ကျလိမ့်မည်။ မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ်မှတစ်ဆင့် filtered ဖြစ်ပါတယ်နှင့်မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာသိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုက်ကွန်ဓာတ်ငွေ့လေထုသန့်ရှင်းရေးအခန်းထဲသို့အလေးအိတ်မှတဆင့်ညှစ်နေသည်နှင့်ပန်ကာလေထုထဲသို့ဆင်းသည်။ အဆိုပါ filter ကိုအိတ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမြေမှုန့်ကိုတိုးမြှင့်ပါဘူးသောအခါ, ပစ္စည်းကရိယာတွေရဲ့ခုခံသတ်မှတ်ဦးအထိမြင့်တက်။ တန်ဖိုးကိုပုံသေဖြစ်တဲ့အခါ, အချိန်ကိုလက်ဆင့်ကမ်း (သို့မဟုတ်မိုက်ခရို differential ကိုဖိအား controller ကို) output ကို signal ကို, program ကိုထိန်းချုပ်တူရိယာဒါလုပ်ကိုင်ဖို့စတင်များနှင့်တဦးတည်းအားဖြင့်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တဦးတည်းဖွင့်လှစ်ခြင်း, compressed လေကြောင်းမှုတ်အောင်နှင့် nozzle ကနေတဆင့်ဖုန်မှုန့်မှုတ် အဆိုပါ filter ကိုအိတ်ရုတ်တရက်ကျယ်ပြန့်သည်နှင့်စစ်ထုတ်အိတ်တွဲမြေမှုန့်အလျင်အမြန် filter ကိုအိတ်ထဲကခြားနားနှင့်ပြာမှုန်ရေပုံး (သို့မဟုတ်ပြာဘင်) သို့ကျဆင်းသည်ပြောင်းပြန်လေထုစီးဆင်းမှု၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင်သော။ မြေမှုန့်ပြာချအဆို့ရှင်များကဆေးရုံကဆင်း, လူအပေါင်းတို့ filter ကိုအိတ်လွနှင့်သန့်ရှင်းနေကြပြီးနောက်, မြေမှုန့်စုဆောင်းပုံမှန်အလုပ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
အခါသွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း  ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တယ်, မြေမှုန့်ဓာတ်ငွေ့ဟာဝင်ပေါက်ကနေပြာရေပုံးသို့ ဝင်. ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင့်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏ၏လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့ဖို့, အ coarser ဖုန်မှုန့်အမှုန်အချို့ထိုကဲ့သို့သော inertia သို့မဟုတ်သဘာဝအအခြေချသကဲ့သို့, ပြာရေပုံးသို့ကျလိမ့်မည်။ မြေမှုန့်မှုန်၏ကျန်လေစီးဆင်းမှုနှင့်အတူအိတ်ခနျးထဲသို့တက် သွား. , ဖုန်မှုန့်အမှုန်ဟာ filter ကိုအိတ် filter ကိုနောကျ filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်အပေါ်သောင်တင်နေကြသည်။ အဆိုပါသန့်ဓာတ်ငွေ့ filter ကိုအိတ်ကနေတဆင့်အထက်သေတ္တာထဲသို့ဝင်ခြင်း, မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့ဖြစ်လျှင်, အဆို့ရှင်ပန်းကန်အပေါက်များနှင့်လေထွက်ပေါက်အားဖြင့်လေထုထဲသို့ဆင်းသည်။ အဆိုပါ filter ကို၏စဉ်ဆက်မပြတ် filtration နှင့်အတူ, မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ခုခံလည်းထ။ တော်လှန်ရေးမတယောတန်ဖိုးကိုရောက်ရှိသောအခါ, ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေး controller ကိုပြာရှင်းလင်းခြင်းအလို့ငှာထွက်ပေးပို့သည်။ ပထမဦးစွာဖယ်ရှားဆို့ရှင်ပန်းကန်ပိတ်ထားသည်နှင့် filter ကိုလေကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုပယ်ဖြတ်သည်။ ထို့နောက်ပြာ controller ကို၎င်းသွေးခုန်နှုန်း solenoid အဆို့ရှင်တစ်ခု signal ကိုပို့ပေးနှင့်ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးအဖြစ်အသုံးပြုမြင့်ဖိအားပြောင်းပြန် Airflow ဟာသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်နှင့်အတူအိတ်စလှေတျတျောမူသည်။ အဆိုပါ filter အိတ် filter ကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်ပေါ်တွင်ဖုန်မှုန့်ပယ်လှုပ်ခြင်းနှင့်ပြာများသန့်ရှင်းရေး၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်စေသောလျှင်မြန်စွာ bulged နှင့်ခိုင်ခံ့သောမတည်မငြိမ်ဖြမ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများအများအပြားသေတ္တာဒေသများသို့ကွဲပြားသကဲ့သို့ပင်, အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကိုသေတ္တာတို့ကထွက်ယူသွားတတ်၏။ ပြာရှင်းလင်းခြင်း၏အမှု၌, တစ်သေတ္တာဧရိယာ၏ကျန်ရှိသော box ကိုဧရိယာနေဆဲပစ္စည်းကိရိယာများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပုံမှန်လည်ပတ်ရေးအတွက်, ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ဖုန်မှုန့်မြင့်မားအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အဓိကသော့ချက်ကဒီအားကောင်းတဲ့ပြာဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်လိုအပ်သောပြာဖယ်ရှားရေးအချိန် (သာ 0.1 ~ 0.2S) အလွန်တိုတောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: MC Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , ဆိုက်ကို Pulse Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်သွေးခုန်နှုန်းအိတ် Filter ကို , ZC Flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , Rotary Flat Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , Glass ကို Fiber Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှု Bag အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး